5 Min Min
သောဒုံနှင့်ဂေါမောရကိုအဘယ်ကြောင့်ဖျက်ဆီးခဲ့သနည်း။မရ။ သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကမီးနှင့်ကန့်နှင့်ဖျက်ဆီးသောမြို့နှစ်မြို့၏ပုံပြင်ကိုပြောပြသည်။ သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့မရ။ ဤကမ္ဘာ ဦး မှတ်တမ်းကမြို့နှစ်မြို့ကိုပြသည် အပြစ်နှင့်ဒုစရိုက်တို့သည်မြို့သူမြို့သားတို့ကိုအပိုင်ရကြ၏။ ထိုကွောငျ့, သူတို့ကိုဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ် အပြစ်ကြီးလွန်းသောအခါဖြစ်ပျက်ပုံကိုဥပမာအဖြစ်
သူတို့ဘ ၀ မှာတစ်ချိန်မှာအာဗြဟံနဲ့သူ့တူလောတတို့ဟာသူတို့ရဲ့သီးခြားလမ်းတွေကိုသွားခဲ့တယ်။ လောတသည်သောဒုံမြို့၌အခြေချခဲ့သည် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုဒေသသည်အလွန်မြေဇာကောင်းခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီဒေသကလူတွေအရမ်းဆိုးသွမ်းခဲ့တယ်။
“ အာဗြဟံသည်ခါနာန်ပြည်၌ နေ၍ လောတသည်ချိုင့်မြို့တို့၌ နေ၍၊ သောဒုံမြို့အနီးမှာသူ၏တပ်ကိုတည်၏။ သောဒုံမြို့သားတို့သည်ဆိုးညစ်။ သခင်အပေါ်အလွန်ကြီးလေးသောအပြစ်များကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။
ကမ္ဘာ ဦး ၂: ၁-၃
အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့သားများသည်စစ်ရှုံးခဲ့သည်။ လောတနှင့်အခြားဒေသခံများအားလုံးကိုသုံ့ပန်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်မရ။ သူဘာဖြစ်တာလဲသိတဲ့အခါ အာဗြဟံသည်တပ်တစ်တပ်ကိုစုသိမ်းပြီးလောတကိုကယ်တင်ခဲ့သည်သောဒုံမြို့သားများနှင့်အတူ ဟိ သောဒုံမင်းကြီးသည်အာဗြဟံအားဥစ္စာပစ္စည်းများပေးခဲ့သည် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီကတည်းကဆုလာဘ်အားလုံးကိုပယ်ချခဲ့တယ် အာဗြဟံသည်သောဒုံမြို့၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုညစ်ညူးစေလိုခြင်းမရှိပေ။
"လူတွေကိုငါ့ကိုပေးပါ၊ ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းထားပေးပါ။ "
"ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်၊ ငါ၏အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၊ ငါ၏ကျိန်ဆိုခြင်းကိုငါကျိန်ဆိုပြီ၊ ချည်မျှင်၊ စန္ဒကူးကြိုးကိုပင်မယူရ။ " ဒါကြောင့် "ငါအာဗြံကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်" လို့မင်းဘယ်တော့မှမပြောနိုင်ဘူး။
ကမ္ဘာ ဦး ၂: ၁၈-၂၃
အခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်အာဗြဟံထံသို့ရောက်ခဲ့၏ သောဒုံနှင့်ဂေါမောရမြို့များနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည် ငါလူတွေကိုအပြစ်ပေးမယ်မရ။ ထို့နောက်အာဗြဟံ ဖြောင့်မတ်သောလူများအတွက်ကရုဏာတော်ကိုတောင်းခံခဲ့သည် ထိုဒေသတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတစ်ယောက်တည်းတွေ့လျှင်ပြောသည် ၁၀ ဖြောင့်မတ်သောသူသည်သောဒုံနှင့်ဂေါမောရကိုမဖျက်ဆီး။
ထို့နောက်သူသည်သခင်ထံသို့ချဉ်း ကပ်၍ ဤသို့ဆိုသည်။
"မင်းကဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကိုလူဆိုးတွေနဲ့တကယ်သုတ်သင်ပစ်မှာလား။ " မြို့ထဲမှာဖြောင့်မတ်သူငါးဆယ်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ မင်းသူတို့ကိုသူတို့အားလုံးကိုသုတ်သင်ပစ်လိမ့်မယ်၊ အဲဒီ့နေရာကဖြောင့်မတ်သူငါးဆယ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်မင်းဒီနေရာကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလား။ ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့မင်းနဲ့ဝေးဝေးနေပါ။ ဖြောင့်မတ်သောသူကိုလူဆိုးတို့နှင့်အတူသတ်။ ၎င်းနှစ် ဦး လုံးသည်ထိုနည်းအတိုင်းပြုသလော။ ဒီလိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့။ မြေကြီးတပြင်လုံး၏တရားသူကြီးဖြစ်တော်မူသောသင်တို့သည်တရားသဖြင့်မပြုကြသလော။
သို့သျောလညျး ဖြောင့်မတ်သောသူ ၁၀ ယောက်ကိုမတွေ့ပါမရ။ ဒါပေမယ့်အာဗြဟံကိုချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည်လောတနှင့်သူ၏မိသားစုကိုသောဒုံမြို့မှမဖျက်ဆီးမီကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးစေလွှတ်ခဲ့သည်အကြောင်းမှာသူသည်ထိုနေရာ၌တစ် ဦး တည်းသောဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သည်။ လောတသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည် (ယောက်ျားများကဲ့သို့) သူ၏အိမ်တွင်တစ်ညတာအိပ်စက်ရန်ဖြစ်သည်။
ညရောက်သောအခါအားလုံး သောဒုံမြို့သားတို့သည်လောတ၏အိမ်ကိုဝိုင်းထားကြ၏ သူတို့သည်ဧည့်သည်နှစ် ဦး ကိုခေါ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုကြ၏ အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရသည်မရ။ သောဒုံမြို့မှယောက်ျားများသည်အိမ်ကိုဝိုင်းထားသည့်အခါသူတို့သည်သူတို့မအိပ်ရသေးပါ။ လူငယ်၊ လူကြီးမရွေးချွင်းချက်မဲ့လူအားလုံးအဲဒီမှာရှိနေတယ်။ သူတို့ကလောတကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်။
"မင်းအိမ်ကိုညအိပ်ဖို့လာတဲ့သူတွေကဘယ်မှာလဲ။ " သူတို့ကိုထုတ်ပစ်! ငါတို့သူတို့နဲ့အိပ်ချင်တယ်!
လောတကသူတို့ကိုတားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အမျိုးသားတွေကအကြမ်းဖက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကောင်းကင်တမန်များကလူတို့ကိုဒဏ်ရာရစေခဲ့သည် မျက်စိမမြင်သောကြောင့်လောတနှင့်သူ၏မိသားစုကိုမြို့မှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်ထွက်ပြေး။ ဘုရားသခင်သည်သောဒုံနှင့်ဂေါမောရတို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
မိုLot်းလင်းသောအခါလောတသည်ဇောရမြို့သို့လာ၏။ ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့အပေါ်သို့မိုim်းရွာစေ။ ၊ ထို့ကြောင့်သူသည်ထိုမြို့များနှင့်သူတို့၏နေထိုင်သူများအားလုံးကိုမြေပြင်ရှိလွင်ပြင်များနှင့်အသီးအရွက်အားလုံးနှင့်အတူဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။
သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့သားတို့သည်သူတို့၏ပျက်စီးခြင်းသို့ ဦး တည်သောအပြစ်များစွာကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်အပြစ်တစ်ခုအတွက်အသေခံရုံသာမကဘဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့သေတယ် သူတို့သည်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလုံးဝစွန့်လွှတ်ခဲ့ကြသည် တရားမျှတမှုအပြစ်မှသူ့ကိုယ်သူလုံးလုံးအပ်နှံသည်။
ထို့ကြောင့်သောဒုံ၊ ဂေါမောရနှင့်အိမ်နီးချင်းမြို့များသည်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်သဘာဝကိုဆန့်ကျင်သောအလေ့အကျင့်များကြောင့်ထာ ၀ ရမီး၏ဒဏ်ကိုသင်ခန်းစာအဖြစ်ယူကြသည်။ ယု ၁:၂၁
အရှက်ကင်းမဲ့ခြင်း - သူတို့သည်သူတို့၏အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုမခံစားရချေ။
သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မရိုးဖြောင့်မှုကသူတို့ကိုစွပ်စွဲပြီးသောဒုံကဲ့သို့သူတို့၏အပြစ်များကိုဝင့်ကြွားစွာဖုံးကွယ်မထားကြပါ။ သူတို့အတွက်သူတို့ကံဆိုးစေသောကြောင့်သူတို့အတွက်အမင်္ဂလာဖြစ်သည်။ ဟေရှာယ ၃: ၉
မင်းရဲ့ညီမလေးသောဒုံနဲ့သူ့ရွာတွေကမာနကြီးတာ၊ စားချင်တာ၊ စိတ်မပါတာနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီးချို့တဲ့တဲ့သူတွေအပေါ်လျစ်လျူရှုတာ။ သူတို့သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့အခြားသူများထက်သာလွန်သည်ဟုယုံကြည်ကြပြီးငါ့ရှေ့၌သူတို့သည်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအလေ့အကျင့်များဖြင့်ပျော်မွေ့ခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါသူတို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ ယေဇကျေလ ၁၆: ၄၉-၅၀
သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ပျက်စီးခြင်းသည်ဥပမာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ဖျက်ဆီးခံရသကဲ့သို့တစ်နေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်လူအားလုံးကိုအပြစ်ပေးလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည်တရားမျှတမှုကိုပြုလိမ့်မည်။
ထို့ပြင်သူသည်သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့များကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီးသူတို့ကိုဆိုးသွမ်းသူများအတွက်သင်ခန်းစာအဖြစ်ထားခဲ့သည်။ ၂ ပေတရု ၂: ၆
မတရားသောသူတို့သည်သူတို့နှင့်ထိုက်တန်သောအရာကိုရလိမ့်မည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သူများကိုကာကွယ်ရန်တန်ခိုးရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်လောတကိုခွင့်လွှတ်ပြီးသူ့ကိုချစ်သောသူများကိုလည်းခွင့်လွှတ်သည်သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်၌ရှိသောအပြစ်ကိုငြင်းပယ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူသည်ဤဆိုးသွမ်းသူများ၏အထိန်းအကွပ်မဲ့သောဘ ၀ ကြောင့် ၀ မ်းမြောက်ခဲ့သောဖြောင့်မတ်သော Lot ကိုလွတ်မြောက်စေသည်၊ သူသည်သူတို့နှင့်အတူနေထိုင်ပြီးကောင်းမှုကိုမြတ်နိုးသောဤဖြောင့်မတ်သောသူအားနေ့စဉ်နှင့်အမျှသူ၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်ဆိုးသွမ်းသောအကျင့်များကြောင့်အပိုင်းပိုင်းစုတ်ပြတ်နေသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူမြင်တယ်၊ ကြားတယ်။ ဤအရာများအားလုံးသည်သခင်အားဘုရားသခင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းအသက်ရှင်သူများကိုစမ်းသပ်မှုမှကယ်လွှတ်ပုံကိုသိပြီးတရားစီရင်သည့်နေ့၌သူတို့ကိုဆိုးဝါးစွာအပြစ်ပေးရန်ကြိုတင်မှာထားသည်။
ယခုသင်နားလည်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ဖျက်ဆီးခဲ့သနည်း ဘုရားရေ။ အပြစ်ကမင်းကိုသူ့ဆီကခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့အမြဲသတိရပါ။